နယ်စပ်မှာ ဂျာနယ်လစ်သင်တန်းပေးတော့ ဗမာ၊ကရင်စကားပြန်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ ဘာသာပြန် တယောက်က အောင်နိုင်ပါ။ သူက ဂျာနယ်လစ်တယောက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးအမြင်ရှိသူ၊ ဟာသ ဥာဏ်ရွှင် သူပါ။သူနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမယ့်သူ့ မှာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ဇတ် လမ်းတခု ရှိပြီး ကျနော်ဒါကိုပိုသိချင်နေပါတယ်။
သူ့ မျက်နှာသွင်ပြင်က ရိုးသားတဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၀တ်စားဆင်ယင်ထားတာတော့ ဆရာ ၀န်တယောက်လိုပါပဲ။ အပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီကိုအညိုရောင်ဘောင်းဘီနဲ့ သပ်သပ်ယပ်ယပ်ဝတ်ဆင်လို့ ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကတော့ သိပ်ကောင်းပါတယ်။သူ့ ဘ၀ရဲ့ကြေကွဲစရာဇတ်လမ်းတွေ ကို အေးအေးဆေး ဆေးပြက်လုံးထုတ်ရယ်မောသူပါ။ တချိန်က သူဟာ ကျောင်းသားတပ် မတော်မြောက် ပိုင်းရဲ့ဥက္ကဌတဦး ဖြစ်ခဲ့သလို ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ကို ထိမှန်ခဲ့တဲ့အကြီးမားဆုံး နာမည်ပျက်မှုမှာ အဓိက နေရာကပါဝင်ခဲ့သူတဦးပါ။
၁၉၉၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်မှာ ကျောင်းသားစစ်သားတွေဟာ သူတို့ ရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက် ၁၅ ယောက်ကို အစိုး ရရဲ့ သူလျှိုလို့ စွပ်စွဲပြီးသုတ်သင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်က ဒီကိစ္စအောင်နိုင် ကို အင်တာဗျူးလုပ်ချင်နေပါတယ်။
ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ သူက ဒီသုတ်သင်မှုကို အမိန့် ပေးခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေထဲက တယောက်ဖြစ်နေ လို့ ပါ။ ဒီအင်တာဗျူးက သူ့ ကိုအကျပ်အတည်းထဲပို့ သလိုပါပဲ။ ဒီကိစ္စကိုအရင်ကတယောက်မှ အင်တာဗျူး သူမရှိခဲ့လို့ သူအံ့သြသွားပုံပါ။ အင်တာဗျူးဖို့ သူသဘောတူပါတယ်။ ကျနော်တို့ မဲဟောင်ဆောင်မှာ တွေ့ကြတယ်။ သူ့ အတန်းကအဖွဲ့ တွေအဲဒီမှာရှိကြတယ်။ မြန်မာဒေါက်တာတွေနေတဲ့ အိမ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ ကျ နော်လည်းနေတယ်။ ကျနော့် မှတ်စုစာအုပ်နဲ့တိပ်ရီကော်ဒါကိုစားပွဲပေါ်ပြင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အောင်နိုင်က ဒီညတော့ ညတာရှည်ဦးတော့မှာပဲလို့ ဆိုတယ်။ ၀ီစကီနဲ့ ရေခဲနဲ့။၀ီစကီသောက်ရင်း ကျနော့် မေးခွန်းတွေကိုသူဖြေပါတယ်။ သူ့ ထွက်ဆိုချက်တွေ အတွက် တိပ်ရီကော်ဒါကို ကျနော် စဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
၁၉၈၈ မှာကျနော်က မန္တလေးဆေးကျောင်းမှာ တက်နေပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တော့ ကျနော် က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ပါ။ အစိုးရက နိုင်ငံေ၇းလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် စွပ်စွဲဖမ်းဆီးမှုတွေ လုပ်တဲ့အခါ ၁၉၈၉ မှာ မန္တလေးကနေ မြောက်ပိုင်းကို ကျောင်းသားတပ်မတော် ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။
တော်တော်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ က မြို့ ကျောင်းသားတွေပါ။အများစုက တောထဲမှာနေဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံ မရှိကြပါဘူး။ ကျနော် တို့ နေဖို့ ဝါးတဲတွေဆောက်ကြတယ်။ ကေအိုင်အိုက ရိက္ခာ ထောက်ပါတယ်။ ရပ်တည်ဖို့ ခက်ပါ တယ်။ ကျနော်တို့ ကဗမာတွေဆိုတော့ ကချင်တွေ အပြည့်အ၀မယုံပါဘူး။ ငွေရဖို့ အတွက် ကျောက်စိမ်းရှာ ဖို့ မိုင်း ကွင်းတခုပေးပါတယ်။ ပေ၈၀၀၀ ထောင်လောက်မြင့်ပါတယ်။ ကျောက်တောင်တွေဖြစ်လို့ ပါးကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ထောက်ပံ့တာနဲ့ မှီခိုရပါတယ်။ မိုးရောက်တော့ ဗမာစစ်တပ်က လာတိုက်ပြီး ကျနော်တို့ စတိုကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ ဆားမရှိစားစရာမရှိဆယ်ရက်လောက်ဖြစ်သွား တယ်။ အားပြတ်ပြီး ငှက်ဖျားတွေလည်းဖြစ်လို့ တချို့ လည်းသေကုန်ကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ တချို့ ဆယ့်ရှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။တယောက်ကိုတလမှ ၅၀ကျပ်သုံး ဖို့ ရ တယ်။ကျနော်တို့ မျောက်တွေထောင်တယ်။မျောက်၊ကြွက်၊ဖြူကောင် ...ရတာအကုန်စားတယ်။
လူတွေသေကြတာကြည့်ပြီးရှော့ ရတယ်။ ကျနော့်မှာစစ်ပွဲအတွေ့ အကြုံမရှိဘူး။ဒါပေမယ့် ကျနော်တိုက် တယ်။ ၁၉၉၀ မှာ ရက်လေးဆယ်လောက် စစ်တိုက်ရတယ်။ အဲဒီတိုက်ပွဲမှာ ခေါင်းဆောင် ဒဏ်ရာရ တော့ကျနော်ကအမိန့် ပေးရတယ်။ ကေအိုင်အိုဆီကလက်နက်တချို့ ရတယ်။ သေသွားတဲ့ ရန်သူစစ်သား ဆီကလည်းလက်နက်ရတယ်။
အဲဒီအချိန်က ကျနော်ကရွေးကောက်ခံရတဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးပါ။ မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေ မှာတာဝန်ခံပါ။ ဗမာပြည်ထဲမှာ တပ်သားသစ်စုဆောင်းပါတယ်။ တခုသတိပြုလာမိတာက ရန်သူ့ လိုင်းတွေ ကြားထဲမှာ ပြဿနာတစုံတရာမရှိပဲသွားလို့ ပြန်လို့ ရနေတာပါ။စစ်ထောက်လှမ်းရေးမိသားစုနဲ့ ဆက်နွယ် နေတဲ့ ကျောင်းသားတချို့ တပ်သားသစ်စုဆောင်းရေးထဲမှာပါလာတာပါ။ အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ တပ်သားအရေအတွက် ၈၀၀ ကျော်အထိတိုးလာပါတယ်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေး နဲ့ ချိတ်ဆက်နေသလားသံသယဖြစ်လာပါတယ်။ ရှေ့ တန်းကရတဲ့သတင်းတွေအရလည်းကျနော်တို့ ဘက်က ကျဆုံးနေပါတယ်။ အခြေအနေက သံသယဖြစ်စရာအခြေအနေပါ။ နအဖစစ်သားတွေကို ကျနော်တို့ တည်နေရာကိုလမ်းညွှန်ပေးနေတဲ့ အမှတ်အသားတွေကို သစ်ပင်တွေမှာ ရဲဘော်တွေကသတိပြုမိပါတယ်။ဒါနဲ့ တချို့ ကိုစောင့်ကြည့်ပါတယ်။ လေးငါးယောက်လောက်ကိုဖမ်းပြီး စစ် ကြောရေးလုပ်တော့ ထောက်လှမ်းရေးစာရင်းတချို့ ရပါတယ်။အဲဒီစာရင်းထဲမှာဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ ဝင် တွေပါပါနေတယ်ဗျ။ တချို့ ကထောက်လှမ်းရေး လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ စပိုင်တွေဖြစ်ပြီး တချို့ က အင်ဖော်မာသတင်းပေးတွေပါ။တချို့ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒအမြင်နဲ့ လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာစဉ်းစားရတော်တော်ခက်ပါတယ်။ I panicked.လူ့ အခွင့် အရေးတို့ ဘာ တို့ ဆိုတာလည်းကျနော်တို့အဲဒီအချိန်ကနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ စပိုင်စာရင်းက အယောက်ရှစ် ဆယ်ကျော် ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့ ကို မယုံမှာစိုး လို့ ရိုက်ထား တဲ့ဗွီဒီယိုခွေပါရှိပါတယ်။ ဒီစပိုင်တွေကို သံခြေကျင်းတွေ ခတ်ပြီး ဘားတိုက်ထဲမှာပိတ်ထားပါတယ်။နောက် ဆုံး မြောက်ပိုင်းကျောင်း သားတပ် မတော်ဗဟိုကော်မတီက စပိုင် ၁၅ယောက်ကို သေဒဏ်ချဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျနော် တို့ စစ်ဖြစ်နေ တာပါ။ စစ်တပ်နဲ့ လက်နက် ကိုင်စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတာပါ။ စပိုင်ကို သေဒဏ်ပေးရမယ်လို့ ကျနော် တို့ ဖွဲ့ စည်းပုံနဲ့ ဥပဒေမှာရေးသား ထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေဟာ ဒီစပိုင်တွေကြောင့် အသတ်ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ တချို့ အဖွဲ့ ဝင်တွေ က စပိုင်အယောက်ရှစ်ဆယ်လုံး ကို သေဒဏ်ပေး ဖို့ တောင်းဆို ပါတယ်။ ငြင်းရင်းခုန်ရင်း နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ၁၅ ယောက် နဲ့ သဘောတူညီချက်ရပါတယ်။ ဒီသေဒဏ်စီရင်ချက်က စပိုင်တွေလုပ် ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေ နဲ့စစ်အစိုးရအတွက် သူတို့ ဘယ်လောက် အရေးပါသလဲဆိုတဲ့ အချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ် ချက်ချခဲ့ တာဖြစ် ပါတယ်။
သတ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောနေတဲ့အောင်နိုင်ဟာအဖြစ်အပျက်တွေကိုတွေး စိတ်ဆင်းရဲ နေ ပုံပါပဲ။ဘယ်လိုဘယ်ပုံ သေဒဏ်ပေးခဲ့သလဲလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါ သူ့ ကိုကြည့်ုပြီး ပိုလို့ စိတ်မသက်မ သာဖြစ်ရပါတယ်။
တချို့ ကိုပစ်သတ်တယ်။ တချို့ ကိုခေါင်းဖြတ်သတ်တယ်။ ကျနော်တို့ အရာရှိတွေကသူတို့ ကို အနီးကပ် ပစ္စ တိုနဲ့ ပစ်သတ်တယ်။ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်တာ ပိုပြီးဝေဒနာခံစားရတယ် လို့ ကျနော်တို့ ထင်ပါတယ်။ ဓားကို ပြောင်းသုံးရင် သူတို့ ဝေဒနာခံစားရနည်းနည်းသက်သာမယ်လို့ ထင်တဲ့အတွက်ဓားကိုပြောင်းသုံးပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းက တိတိရိရိမပြတ်ဘူးဗျ။ But they were not cleanly beheaded, even though the spinal cords were severed.သတ်တာကို ကျနော် စောင့်ကြည့်တယ်။ ဒါဟာ ကျောင်းသားတပ်မတော်စစ်သားတွေရှေ့ မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ကျနော်တို့ သူတို့ အားလုံးကို လွှတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွှတ်လိုက်ရင် ကျနော်တို့ သူလျှိုတွေကို ကြိုဆိုသလိုဖြစ်နေမယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာ တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။ ဒီလိုမကွက်မျက်ခင်မှာ ကေအိုင် အိုကနေ နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ ၊ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီတို့ ကို ချဉ်းကပ်ပါသေးတယ်။ အကျဉ်းသားတွေကို သူတို့ ဆီကိုလွှဲဖို့ ကျနော်တို့ အကူအညီလိုပါတယ် လို့ ။ သူတို့ ပြောတာက သူတို့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကို မရောက်နိုင်တဲ့အတွက် သူတို့ မကူညီနိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဒီကိစ္စဟာ ကျနော်အတွက် အခက်ခဲဆုံးကိစ္စတခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ မှာ ရွေးစရာလမ်းမရှိဘူးလို့ ခံစားရတယ်။
သူလျှိုတွေကို သတ်ပစ်တာ ဗမာပြည်မှာသိပ် တော့ မဆန်းလှပါဘူး။ ဗမာစစ်တပ်က သူလျှိုမိရင် တရား ရုံး တွေတင်မနေပဲနေရာမှာတင် သတ်ပစ်ပါတယ်။
အောင်နိုင်အခန်းပြင်ကိုထွက်သွားပါတယ်။ ပြန်ဝင်လာတော့ စကားမဆက်ခင် လေကိုခပ်ပြင်းပြင်းရှူသွင်း လိုက်ပါတယ်။
ဘ၀တွေက ငြိမ်းချမ်းနေရင်တော့ စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ သွားဖို့ လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်တိုက်နေတဲ့အချိန် ကတော့ မတူပါဘူး။ တောထဲမှာ နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ တခုတည်းသောလမ်းက လက်နက်နဲ့ ပါ။ ဒီလိုသတ် လိုက်လို့နိုင်ငံရေးအရ ရှေ့ ကိုတိုးတက်သွားတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့် တယောက်မှ နိုင် ငံ ရေး အကျိုးအမြတ်မရခဲ့ဘူး။ ကျနော်တို့ ထဲမှာ အကွဲအပြဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ တယောက်မှ ဘာတခုမှ မရခဲ့ဘူး။ ဒီသတ်ပွဲ မတိုင်ခင်က ငပိနဲ့ စားတယ်။ သတ်ပွဲပြီးတော့လည်း ငပိနဲ့ ပဲ။ ၁၅ယောက် အစားအ ယောက် ရှစ်ဆယ်ဖြစ်သွားနိုင်တာပါ။ မိသားစုတွေက စိတ်ဆိုးကြမယ်၊စိတ်ထိခိုက်ကြမယ်ဆိုတာ နားလည် ပေးနိုင် ပါတယ်။ မိဘတွေကို လာဖို့ ကျနော်တို့ နဲ့ စကားလာပြောဖို့ ကျနော်တို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ကိုသစ္စာဖောက်သူတွေဟာ ကျနော်တို့ ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေပါပဲ။ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ထွန်းအောင် ကျော်(အဲဒီအချိန်က ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ ဥက္ကဌပါ) အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူက ကျနော့် အကိုကြီးလိုပါပဲ။ ကျနော်တို့ အရမ်းကို ရင်းနှီးပါတယ်။ သူက သူလျှို လို့ ဝန်မခံပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သက်သေ အထောက်အထားတွေအရ သူကသူလျှိုပါ။
တိုက်ပွဲက ပြင်းထန်ပါတယ်။ စစ်ဆိုတာဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမှန်တရားတခုပါ။ ကျနော်တို့ က သီးခြားဖြစ်နေပြီး တော့ လူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တွေနဲ့ လည်း အဆက်အသွယ်မရှိပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီ၊လူ့ အခွင့် အရေးတွေကိုသင်ကြားဖို့ လည်း အခွင့်အလမ်းမရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ များရှိခဲ့ရင် အခြေအနေက တမျိုးဖြစ် သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တာဝန်ယူပြီး ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ တောင်အာဖရိက က အမှန်တရားကော်မရှင်လိုမျိုး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတခု ဖြစ်သင့် ပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ လူတွေ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။The problem will be to get MI to hand over their files.
ကျနော်တို့ ရဲ့ သူရဲကောင်းအောင်ဆန်း ကိုအတုခိုးပြီး ကျနော်တို့ နိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောခိုခဲ့ ကြတယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကြောင့် ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တယ် ဆိုတာတောင် မသိခဲ့ ပါဘူး။
အဲဒီတုန်းကကျနော့်အသက် ၂၄ နှစ်ပါ။ ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် လူကြီးဖြစ်ပြီလို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအတွေ့ အကြုံပြီး တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ ကျနော်အရမ်းငယ်ပါသေး လားဆိုတာသဘောပေါက်သွားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအပြင်ဖက်ကိုရောက်လာတဲ့အတွက် ကျနော်ဝမ်းသာ တယ်။
အင်တာဗျူးအပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ မဲဟောင်ဆောင်မှာ အောင်နိုင်နဲ ကျေ နော်နေ့ လည် စာစားပါတယ်။ကျနော်ကအနံ့ ပြင်းပြင်းနဲ့ ဟင်းခွက်ကိုဘာလဲလို့ မေးကြည့်တော့သူကရီပါတယ်။ ပြီးတော့ မှပြောတာ ကမျောက်အူတွေပါ တဲ့ ။
အောက်ကမူရင်းအင်တာဗျူးပါ။ ယှဉ်ဖတ်ကြည့်ပြီး အမှားအယွင်းရှိရင် ပြင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
On February 12,1992, student soldiers executed fifteen of their comrades accused of spying for the regime. I wanted to interview Aung Naing about it, as he was one of the leaders who ordered the executions. It wasatough place to put him in, although he was surprised that no one had ever interviewed him about the incident before. He agreed, and we met in Mae Hong Son—where his group's classes were held—at the house ofaBurmese doctor, where I was staying. Aung Naing judged it would bealong night as I placed my notebook and tape recorder on the table. He responded by gettingabottle of whiskey andacooler of ice. He drank heavily as we talked. I let the tape recorder capture his testimony.
"In 1988 I was studying medicine in Mandalay. I wasastudent leader during the pro-democracy demonstrations. The regime accused me of illegal political activities, so in 19891 left Mandalay to join the northern ABSDF in the Kachin State, close to the Chinese "It was tough, most of us were city kids with no experience of living in the jungle. We built and lived in basic bamboo huts. The Kachin Independence Organization (KIO) supplied us with food, but it was difficult to survive, and many died. The Kachin didn't completely trust us, as we were Burmans. They gave usaregion to make money from jade mining and tax. It was 8,000 feet high, rocky, and difficult to grow rice or crops. We depended on supplies "In the rainy season the Burmese army attacked our positions, destroying our stores. We went without rice and salt for ten days. We became weak and those who got malaria died. I lost many friends, some only eighteen years old. Each of us got fifty kyatamonth to live on. We existed by trapping and eating monkeys, rats, and porcupines . . . anything.
"I was shocked to see people blown up and dead bodies. I had no battle experience, but I did fight. In 1990 we fought for forty days. I took command after our chief-of-staff was injured. We got weapons from the KIO and what we took from dead enemy soldiers.
"We started to watch some people. We arrested four or five and, after interrogation, we hadasmall list. The list included members of our central committee. We found out the National Intelligence Bureau had trained some of these as spies, and others were just used as informers. I think some were motivated by ultra-nationalistic visions ofaBurman master race.
"It was very difficult for us to know what to do. I panicked. We knew nothing about human rights, or, more to the point, we didn't understand. We asked the KIO to help us to interrogate. By now we hadalist of eighty spies. We made videotapes in case no one believed us. We chained the spies and locked them in the barracks.
ကျောင်းသားတပ်မတော်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့…ကျနော့်မိတ်ဆွေ တယောက်ကအီးမေးလ်နဲ့စာလှမ်းပို့ပါတယ်….ကျနော်တို့ တပ်ထဲမှာရှိတုန်းက….မြောက်ပိုင်းက သူလျှိုတွေရဲ့အစစ်ခံချက် ဗွီဒီယိုခွေကြည့်လိုက်ရတယ်တဲ့….အဲဒီထဲမှာ သူတို့ ထောက်လှမ်းရေးကပါဆိုတာကို အသီးသီးဝန်ခံထွက်ဆိုထားတယ်…အဲဒါ ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်းတဲ့….ကျနော်က အီးမေးလ်ပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်….အောင်နိုင်(ရော်နယ်အောင်နိုင်)ကလည်းပြောပါတယ်..ထွန်းအောင်ကျော်အပါ ၀င်အသတ်ခံရသူတွေ၊ဖမ်းဆီးထားသူတွေဟာ…သူလျှိုတွေအစစ်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း…ထွက်ဆိုချက်သက်သေအထောက်အထားတွေ..ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်……အဲဒီ….အောင်နိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျနော်စစ်ပြပါမယ်…၀ါယာ ရှော့တိုက်မစစ်ဘူး၊ရိုက်လည်းမရိုက်ဘူး၊ဓါးနဲ့လည်း လက်ချောင်းတွေမဖြတ်ဘူး၊ ကျနော့်ကို တလက်မအရွယ်ရှိတဲ့ တွယ်ချိတ်တချောင်းပဲပေးပါ…..ခင်ဗျား သူ့ပါးစပ်က ဘယ်လိုဟာမျိုးထွက်စေချင်လည်း…လက်မှတ်လိုချင်ရင် သူ့လက်မှတ်တင်မက သူ့လက်ဗွေအစစ်နဲ့ပါ..လုပ်ပေးလိုက်ဦးမယ်…..အောင်နိုင် ပါးစပ်က…ကျနော်ဟာ..ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်တာဝန်ပေးထားတဲ့..ကျောင်းသားတပ်မတော်ကိုဖြိုခွဲဘို့လွှတ်လိုက်တဲ့…ဗိုလ်ကြီးပါလို့ထွက်စေချင်သလား….ကျနော်ကိုယ်တိုင်က ထောက်လှမ်းရေးအစစ်ဖြစ်ပါတယ်..သိသွားမှာကြောက်လို့..ကျနော်က ဦးအောင်ဆော်လိုက်တာပါလို့…ထွက်စေချင် သလား…..ပို ယုတ္တိရှိအောင် ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းခွေလေးပါ ရိုက်ထားလိုက်ဦးမယ်…..လွယ်ပါတယ်…မခက်ပါဘူး…သူများကိုနှိပ်စက်ရတယ်ဆိုတာ..ကိုယ့်အသားနာတာမှ မဟုတ်တာ….ဒီလိုလုပ်ရပ်ဆိုတာ..စစ်အစိုးရလုပ်နေကြအလုပ်တွေပါဗျာ….. ရွံလွန်လွန်းလို့ပါလို့…ထောက်လှမ်းရေးလောက်ကိုကြောက်နေရင်…သူ့ထက်မြင့်တဲ့…ဗိုလ်သန်းရွှေကိုဘယ်လိုတော်လှန်ကြမလည်းလို့ ဆိုတော့….ကျနော့်ဆီ အီးမေးလ်ပြန်မလာတော့ဘူးဗျ။